जाडोमा सेक्सलाई कसरी रोचक बनाउने? यसो गर्नुहोस् - khulla Post
पुरुषोत्तम ढकाल २७ मंसिर २०७६, शुक्रबार १६:०० 1881 Views
काठमाडौं: नेपाली समाजमा सेक्सलाई अझै पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। प्राकृतिक प्रक्रिया मानिएको सेक्सका बारेमा नेपाली समाजमा खुलेर बहस भने कमै मात्रामा हुने गर्दछ। जीवित प्राणीको जिवन सेक्ससँग जोडिएको छ तर पनि नेपालीहरुलाई सेक्सका विषयलाई बाहिर ल्याउनै चाहँदैनन्।
कोरोना पोजेटिभ एक व्यक्तिको यथार्थ भोगाई
यदि सबै मानिस शाकाहारी भए के हुन्छ?
श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा हुन्छ ? यस्ता छन् ८ फाइदा